Tontolo: BRICS vs. NATO – Tolona Am-batolampy Momba Ny Hevitra Fitsabatsabahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2012 12:34 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Español, polski, Italiano, English
Ity lahatsoratra ity da ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Fifandraisana & Fandriampahalemana Iraisampirenena.
Ny fanapahan-kevitra vao haingana norasin'i Shina sy Rosia hampiasa ny vato tsy azo ivalozana tao amin'ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena Mikambana ho vahaolana ao Syria – dia nanainga indray ny adihevitra mikasika ny fifandraisan'ireo hery ‘vaovao’ tahaka an'i Brezila, Rosia, India, Shina ary Afrika Atsimo – ny BRICS – amin'ireo hery ‘tranainy’ tahaka ny Fifanaraham-piaraha-misan'ireo Firenena Any Amerika Avaratra (OTAN) rehefa misy ny fitsabahana iraisam-pirenena.
Ny kaonferansan'ny BRICS natao tamin'ny Martsa lasa teo no nanome ny lafika niaingan'ny lahatsoratr'i Oliver Stuenkel ao amin'ny The Hindu izay efa naminavina ny fanapahan-kevitr'i Rosia sy Shna hampiasa ny vato tsy azo ivalozana fanintelony indray amin'ny Fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana momba an'i Syria:
Ery ampitan'ny latabatra, ny toerana noraisin'ny BRICS dia niteraka fanakianana tsy tambo isaina teny anivon'ireo hery “tranainy’. Daniel Korski, mpanolotsaina ao amin'ny Solotena Ambonin'ny Fiombonambe Eoropeana momba ny Politikan'ny Raharaham-Bahiny sy ny Fandriampahalemana, dia nanoratra fa efa noheverin'ny olona ny tsy hahitan'izao tontolo izao làlan-kombana ny taona 2012:
Samy mahabe resaka daholo ny olan'i Syria sy Libya. Raha ny marina, noporofoin-dry zareo fa manana fomba samihafa enti-miatrika fifandonana ny hery ‘tranainy’ sy ny ‘vaovao’, ary misy fomba fijery samihafa entina manohana ireny fanapahan-kevitra ireny. Alex Thurston, manomana doctorat ao amin'ny Departemantan'ny Finoana – Anjerimanontolon'ny Northwestern, Illinois, ao amin'ny blaoginy sahelblog dia mihevitra fa ‘Hadisoana ny Fitsabahan'ny OTAN’ tany Lybia :
Ireo firenena manan-tantara amin'ny fomba ntaolo mitsabatsabaka amin'ny raharaham-paritra dia manome tsiny ireo hery ‘vaovao’ ho tsy mihetsika amin'ny anaran'ny zon'olombelona. Ireo hery ‘vaovao’ miteny fa ny fitsabahana dia vao mainka manimba fa tsy manasoa. Amin'ny ankapobeny ny firenena rehetra dia mihetsika ho amin'ny tombontsany. Raha ny misy, tamin'ny taona lasa, dia nanararaotra nanosika ny toekareny i Shina sy ireo firenena hafa tamin'ny alàlan'ny fifandraisana ara-toekarena ananany, nihoatra ny 700 lavitrisa dolara ho an'ny resaka fiarovana no fandanian'i Etazonia, ny betsaka indrindra taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, araka ny Time. Ilay Breziliana mpanao gazety, Pepe Escobar, dia misisika miantso ny fitsabahan'ny ‘Andrefana’ ao Syria, “Ny ‘sandan'ny afobe’ amin'ny Ady Masin'ny OTAN” [Pt]:
Ao anatin'ny fifandrindrana misy eo amin'izao tontolo izao ankehitriny – izay nisovohan'ny rafitra marolafy iraisam-pirenena ny rafitra tontolo tsy misy afa-tsy tendro roa nifampizaràn'i Etazonia sy ny Firaisana Sovietika taloha – dia niova ny anjara toerana misy ny OTAN – manova zavatra araka ny fijerin'i Hans Christof von Sponeck, Sekretera Jeneraly lefitra fahiny tao amin'ny Firenena Mikambana:
Ity lahatsoratra ity sy ny dikanteniny amin'ny teny Espaniola, Arabo ary Frantsay dia fangatahan'ny International Security Network (ISN) tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa hikatsahana hamoahana ny feon'ireo olon-tsotra mikasika ny fifandraisana irasam-pirenena sy ny fandriampahalemana eran-tany. Navoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'ny ISN ity lahatsoratra ity, jereo eto ny tantara mitovitovy amin'izany.